Programmer Diaries: Android မှာ မြန်မာယူနီကုဒ်ကို သုံးလို့ရတဲ့ ဘရောင်းဇာ မရှိဘူး
ကျွှန်တော်သုံးနေသော ဖုန်းသည် Android ဖြစ်၏။ ကျွှန်တော်သည် Java ပရိုဂရမ်မာ တစ်ဦးဖြစ်၏။ Android ပေါ်ခါစက လေ့လာရန် စဉ်းစားခဲ့သော်လည်း မလုပ်ဖြစ်ခဲ့။ Android သည် ဖုန်းတစ်လုံးသာဖြစ်ပြီး၊ ဒီကောင်ပေါ်မှာ လုပ်နိုင်တဲ့အလုပ်ဟာ သိပ်ရှိမှာမဟုတ်ဘူး၊ ပြီးတော့ အခြားသော Java တွေက ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ အတွက် Android ကို လေ့လာတဲ့အထိ မရောက်ခဲ့ပါ။
ဒီနေ့ Android Play ဈေးကွက်ထဲက မြန်မာ ဘရောင်းဇာတစ်ခုကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဇော်ဂျီကုဒ်ကို ဒီအတိုင်းကြည့်လို့ရပါသည်။ မြန်မာယူနီကုဒ်ကို ကြည့်မရပါ။ အတော်လေးကို တင်းသွားပါသည်။ ဘယ်သူမှ ရေးမထားရင် ငါရေးမယ်ဆိုပြီး။ ဒါပေမယ့် အခုကစရပါမည်။ လော်လောဆယ်တော့ ရှိပြီးသား ပရိုဂျက်အဟောင်းများကို လိုက်ပြီး ရှာဖွေပါဦးမည်။
မြန်မာယူကုဒ်ကို နေရာတကာမှာ အသုံးပြုနိုင်ရေးသည် ကျွှန်တော်တို့အားလုံး အရေးဖြစ်ပါသည်။
Posted by JDC at 9:56 AM
Unknown September 11, 2012 at 8:07 AM
yep, yep your right, Bro
zaw min Lwin September 12, 2012 at 9:48 AM
Yes Ko Soe Thi. Java 2D can't display Complex Asian Unicode. It isafamous bug of Java Platform. So that Myanmar Unicode font can't display well on Java Platform. Eclipse or some other Open Office can display Myanmar Unicode as they use native Platform. We should try this bug.
Playframework နှင့် တိုင်ပတ်ခဲ့ရသောည
JQuery ဖြင့် Link များကို လှပစေခြင်း
Android မှာ မြန်မာယူနီကုဒ်ကို သုံးလို့ရတဲ့ ဘရောင်း...